Sony Xperia 10 Iyo Xperia 10 Plus: Qeexitaannada, Qiimaha iyo Siidaynta | Androidsis
Sony wuxuu ka mid ahaa noocyada aadka loo filayo ee MWC 2019, tan iyo waxay noo balanqaadeen inay noo daayaan warar taxane ah muhiimadda. Toddobaadkan dhammaadkiisa waxaa soo baxay warar xan ah oo sheegaya in shirkaddu ay soo bandhigi doonto magac beddelidda taleefoonnada kala duwan, ka dib markii ay soo ifbaxeen arrintan. Isbadal magac oo aakhirkii rumoobay. Maaddaama ay nooga tagayaan noocyo cusub oo casri ah. Moodooyinka ugu horreeya waxay ka yimaadeen heerkiisa dhexe: Sony Xperia 10 iyo Xperia 10 Plus
Kuwani Sony Xperia 10 iyo Xperia 10 Plus waa aalado raaca khadka joogtada ah, qayb ahaan, astaanta. In kasta oo ay taagan yihiin gaar ahaan sharaddiisa shaashad weyn, kaas oo ku fadhiya aqlabiyadda aaladda hore. Maxaan ka filan karnaa noocyadan caanka ah ee Sony?
Tan iyo qaabkan, shirkaddu waxay ka tagaysaa saamiga 18: 9 ama 19: 9 si moodada ugu leh suuqa. Waxay horey uga sii talaabeen dhanka isticmaalka hore oo ay nooga tagaan a casriga ah oo la yimaada saamiga 21: 9. Shaashad aan dhammaad lahayn, oo ballan-qaadaysa khibrad isticmaale oo xiiso leh wakhti kasta.
Kadib Waxaan ka hadleynaa mid kasta oo ka mid ah labadan taleefannada casriga ah shaqsi ahaan. Si aad u aragto waxyaabaha ku kala duwan.
1 Sooc Sony Xperia 10
2 Qeexitaannada Sony Xperia 10 Plus
Sooc Sony Xperia 10
Heer farsamo, waxaan wajaheynaa nooc dhexdhexaad ah. Waxay si fiican u hoggaansameysaa marka la eego qeexitaannada, in kasta oo ay jiraan dhowr dhinac oo calaamaddu khalad sameyn karto, sida baytarigeeda, oo u muuqata mid aad u yar. Laakiin tani waa wax lagu arki karo isticmaalka aaladda. Kuwani waa qeexitaannada buuxa ee Sony Xperia 10
Faahfaahinta farsamada Sony Xperia 10
Tusaale Xperia 10
Screen 6-inch LCD leh HD + xal buuxa iyo saamiga 21: 9
Gacaliye Snapdragon 630
Kaamirada gadaal 13 + 5 Xildhibaan
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.0 3CA LTE CAT12 / 13 WiFi 802.11 ac GPS GLONASS
Tilmaamo kale Sawirka faraha ee dhinaca NFC
Batariga 2.870 mAh oo leh lacag degdeg ah
Cabbirada 156 x 68 x 8.4 mm
Peso Gram 162
Shaki la'aan, shaashadda ayaa ah cunsurka soo jiita dareenka ugu badan ee taleefankan casriga ah. Astaantu waxay dooratay inay sii yareyso looxyadeeda, gaar ahaan dhinacyada. Marka Sony Xperia 10 durba aad ayuu ugu dhowyahay fikradda shaashadda oo dhan. Intaas waxaa sii dheer, in ay dad badan ka farxiyaan, darajo iyo dalool shaashadda midna lama isticmaalin.
Ka processor ahaan waxay nooga tagayaan Snapdragon 630, taas oo ah ikhtiyaar weyn oo dhex dhexaad ah. Ka awood badan kana waxtar badan kii ka horeeyay, Snapdragon 625. In kasta oo batteriga aan ka helno aaladda, 2.870 Mah waxaa laga yaabaa inaysan ku filneyn. Gaar ahaan haddii aan tixgelinno inay tahay taleefannada casriga ah ee dhexdhexaadka ah. In kasta oo Sony ay u badan tahay inay ka faa'iideysato baytariyadan wax badan, waa inaan aragnaa sida ay u shaqeyso.
Marka laga hadlayo kaamirooyinka, waxaan sii wadeynaa inaan aragno waxa aan ka helno bartamaha. Sony Xperia 10 wuxuu ku sharxayaa kamarad gadaal labalaab ah, halka dhanka hore aan ku leenahay hal muraayadaha indhaha. Intaa waxaa dheer, taleefanka ayaa horeyba ula yimid Android Pie asal ahaan nidaamka qalliinka.
Qeexitaannada Sony Xperia 10 Plus
Marka labaad waxaan helnaa taleefankan casriga ah. Maaddaama magiciisu na sii sheegayo, tan Sony Xperia 10 Plus waa nooc ka yara horumarsan kii hore. Waxay leedahay shaashad xoogaa ka weyn, iyada oo la ilaalinayo 21: 9 saamiga, processor ka fiican oo ka awood badan guud ahaan. Laakiin waxay ku sii jirtaa inta u dhexeysa. Kuwani waa qeexitaankiisa:
Faahfaahinta farsamada Sony Xperia 10 Plus
Tusaale Xperia 10 Plus
Screen 6.5-inch LCD leh HD + xal buuxa iyo saamiga 21: 9
Gacaliye Snapdragon 636
Kaydinta gudaha 64GB (la ballaarin karo illaa 512GB)
Kaamirada gadaal 12 + 8 Xildhibaan
Kaamirada hore 8 xildhibaan leh fur f / 1.4
Batariga 3.000 mAh oo leh lacag degdeg ah
Cabbirada X x 167 73 8.3 mm
Sony waxay ku baabisay naqshadda cusub ee taleefannadeeda magaca Ultimate Wide. Waa shaashad ka dheer waxa aan ku aragno noocyada kale maanta. Tani waa wax xiiso leh, maxaa yeelay waxay haysaa ballaca noocyada kale, xitaa khafiifsan, laakiin leh shaashad dheer. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko sida ay u shaqeyso markii wax la cunayo ama la adeegsanayo barnaamijyada aaladda.
Inta kale, waxaan arki karnaa in Sony Xperia 10 Plus uu xoogaa ka xoog badan yahay bartamihii dhexe marka loo eego kii hore. Xaaladdan oo kale, processor-ka Snapdragon 636 ayaa loo adeegsadaa, kaas oo ka wanaagsan kii hore. Intaa waxaa sii dheer, waxay sidoo kale la imaaneysaa awood weyn oo RAM ah gudaha, taas oo u oggolaan doonta hawlgal dheecaan badan ah marwalba. Batariga, shirkaddu waxay adeegsatay 3.000 Mah kiiskan, sidoo kale lacag deg deg ah. Kaydinta 64GB ayaa lagu ballaarin karaa microSD.
Sida moodada kale, waxaan ka heleynaa sawirka faraha ee dhinaca on this Sony Xperia 10 Plus. Waxay la timid Android Pie asal ahaan, sida lagu xaqiijiyay soo bandhigideeda. Sida kamaradaha, waxay sharad ku galaan isku-darka laba-geesoodka ee dhabarka iyo hal shidma oo ku yaal wejiga hore ee qalabka. Wax aan inta badan ku aragno bartamaha dhexe.
Xaaladda Sony Xperia 10, waxaan arki karnaa inay jiri doonaan hal nooc oo taleefanka ah oo iib ah. Waxaa la xaqiijiyay in suuqa laga bilaabi doono bisha Maarso, midab madow, qalin, buluug buluug iyo casaan. In kasta oo xilligan aynaan qiimo ugu fadhiyin aaladda. Waxaan rajeyneynaa inaan kula kulano muddo yar kadib.
Sidii qaabkii hore, ma hayno xog aad u badan xilligan la joogo furitaanka Sony Xperia 10 Plus. Astaantu nama siinin taariikho, inkasta oo la filayo inay sidoo kale dhici doonto bisha Maarso. Xaaladdaada, waxaad awoodi doontaa inaad ku iibsato taleefanka midab madow, qalin, buluug buluug ah iyo dahab. Sidoo kale waxba kama ogin qiimaha ay yeelan doonto. Marka waxaan rajeyneynaa inaan si faahfaahsan u ogaanno wax yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Sony » Sony Xperia 10 iyo Xperia 10 Plus: Sony dhex dhexaadkiisa cusub (Video)